ပျောက်အောင်(အခမဲ့)ကုနိုင်တော့မည့် အသည်းရောင်“စီ”ရောဂါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ပျောက်အောင်(အခမဲ့)ကုနိုင်တော့မည့် အသည်းရောင်“စီ”ရောဂါ
Posted by kai on Mar 9, 2010 in Health & Fitness, How To.., News |3comments
Cedars-Sinai Hepaptitis C
ကမ္ဘာ့လူဦးရေသန်း၁၇၀နှင့် အမေရိ ကန်လူမျိုး ၃.၂သန်းတို့ ခံစား နေရသော၊ အသည်းကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်သည့် Hepaptitis C အသည်းရောင်’စီ’ရောဂါကို အမေရိကနိုင်ငံတွင် အခမဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနိုင် ပြီဖြစ်ကြောင်း အမေရိကနိုင်ငံလော့စ်အိန်းဂျ လိစ်မြို့နေ မြန်မာဇာတိနွယ် လူနာတဦးကရတနာပုံနေပြည်တော် သတင်းစာသို့အကြောင်း ကြားလာသဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာဇာတိ နွယ်တို့အတွက် အလွန်အကျိုးရှိနိုင်မည့်သတင်း ထူးဖြစ်သောကြောင့် အခမဲ့ဆေးကုသပေးနေ သည့် Cedars-Sinaiဆေးရုံအသည်းရောဂါ ကုဌာနသို့ ရက်ချိန်းယူကာ သွားရောက် သတင်းရယူခဲ့ပါသည်။
Cedars-Sinaiဆေးရုံအသည်းရောဂါ ကုဌာန၌ ၆လကျော်ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက်အသည်းရောင်စီပိုးပျောက်ကင်း၍နလံထကာစထိုမြန်မာလူနာသည်အားနည်းနေသည့် ကြားမှလော့စ်အိန်းဂျလိစ်မြို့Cedars-Sinai ဆေးရုံအသည်းရောဂါကုဌာနသို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျလိုက်လံပို့ဆောင် မိတ်ဆက်ပေးသဖြင့် အသည်းရောဂါ ဌာနမှူး ဒေါက်တာFred Poordad M.Dအားတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား (လော့စ်အိန်းဂျလိစ်)တက္ကသိုလ်(UCLA)မှဆေးပညာပါမောက္ခ တဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Fred Poordad M.Dသည် များပြားလှသောလူနာများကိုဆေးကုသပေးနေသည့်ကြားမှရက်ချိန်းပေးထားသည့်ဇန်န၀ါရီလရက်တရက်တွင် ထမင်းစားချိန်ဖြစ်သော နေ့လည်၁၂နာရီ၌ ရတနာပုံနေပြည်တော်သ တင်းစာကိုအချိန်ပေးကာအသဲရောင်’စီ’ရောဂါ ၏ အခမဲ့ဆေးကုသမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသေး စိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
နံပါတ်(၁)- အသက်၁၈နှစ်ကနေ၆၅နှစ်အ တွင်းရှိရပါမယ်။
နံပါတ်(၃)- အသည်းရောင်’စီ’ရောဂါပိုးရှိနေ သူများ။ ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံက အခမဲ့ ဆေးကုသပေးပါတယ်။
နံပါတ်(၂)- အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဝေဒနာ သည်နဲ့အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးရှိနေသူ။
ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကို အသည်းရောင်စီရောဂါ ရှိလို့ ဆေးကုသမှုခံဖို့ ရောက်လာတဲ့လူနာကိုဆေးရုံကနေ ဘာစာရွက်စာတမ်းမှမတောင်းပါဘူး။စစ်လဲမစစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကရောက်လာတဲ့လူနာကိုလိုအပ်တဲ့ သွေးစစ်၊ဆေးစစ်တာ နဲ့ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေကိုပဲ မေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေပဲ လာလာဆေးရုံရဲ့ကုသမှုသတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီရင်ဘယ်သူ့ကိုမဆို ရောဂါပျောက်ကင်းအောင်လက်ခံဆေးကုသပေးပါတယ်။
အသည်းရောင်စီရောဂါပျောက်ကင်းနှုံးကဟိုးအရင်က၁၀ရာခိုင်နှုံးပဲ ရှိခဲ့ပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်၁၅နှစ်အတွင်းမှာပျောက်ကင်းနှုံးက၅၀ရာခိုင်နှုံးအထိရှိလာပြီး ခေတ်မှီတိုးတက်တဲ့သု တေသနပြုမှုတွေကြောင့် အခုဆိုရင် အသည်းရောင်’စီ’ရောဂါပျောက်ကင်းနှုံးဟာ၇၀ရာခိုင် နှုံးအထိရောက်ရှိလာပါပြီ၊နောင်၅နှစ်မှာဆိုရင်ပျောက်ကင်းနှုံး၈၀ရာခိုင်နှုံးအထိရှိလာနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဆေးဘယ်နှစ်မျိုးပေါင်းပြီးကုသပေးနေပါသလဲ၊ Side Effectsရှိပါသလား၊
လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်အထိလုပ်ခဲ့တဲ့သုသေတနပြု ချက်တွေအရ အသည်းရောင်စီရောဂါပျောက် ကင်းနိုင်တဲ့ဆေးအမျိုးအစားပေါင်း၁၅မျိုးအထိတွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။
အခုအရေပြားအောက်ကိုဆေးထိုးရတဲ့ Intereron၊ သောက်ဆေးတမျိုးဖြစ်တဲ့ Rivorivin နဲ့ Protease Inhibitorsဆေးသစ်တမျိုး နဲ့ပူးတွဲကုသတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကုထုံးကိုသုံးပြီးအသည်းရောင်’စီ’ရောဂါကို၆လကနေတနှစ်အတွင်းမှာလုံးဝပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးနိုင် နေပါပြီ။ သောက်ဆေးထိုးဆေးတိုင်းမှာငိန န်နခအျ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သောက်ဆေးထိုးဆေးရပ် လိုက်တဲ့နောက်မှာငိန န်နခအျတွေမရှိတော့ ပါဘူး။
Cedars-Sinai ဆေးရုံအသည်းရောဂါ ဌာနမှာရှိတဲ့အသဲရောင်’စီ’ရောဂါကုထုံးရဲ့ကုန် ကျစရိတ်ကလူနာတယောက်အတွက်အနည်းဆုံးဒေါ်လာတသောင်းခွဲကနေနှစ်သောင်းအထိကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။
Cedars-Sinaiဆေးရံရဲ့အသည်းရောဂါဌာနအတွက်နှစ်စဉ် ဆေးသုတေသနလုပ်ဘို့ ရံပုံငွေသီးခြားသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီရံပုံငွေထဲကနေကုသပေးတာပါ။
လူနာမှာအသည်းရောင်’စီ’ရောဂါပိုးရှိတယ်လို့သွေးဖေါက်စစ်ဆေးလို့ သိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒါ မှမဟုတ်ဆရာဝန်တဦးကပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆေးကုသမှုခံယူချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကိုလာပြီးတော့သွေးဖေါက်၊ ငြသBiopsyခေါ်တဲ့အသားစယူစစ်ဆေးခြင်းတွေ ကိုစလုပ်ရပါမယ်။ပြီးတော့မှသွေးအဖြေနဲ့ အသားစအဖြေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆေးကုသခြင်းကို အခမဲ့ကုသခံယူခွင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Cedars-Sinai ဆေးရုံမှာ အသည်းရောင်စီပိုး ရှိ-မရှိကိုစစ်ဆေးပေးပါသလား၊
ဆေးရုံမှာ အသည်းရောင် စီပိုး ရှိ-မရှိကိုမစစ်ဆေးပေးပါဘူး။အပြင်မှာစစ်ဆေးပြီးအသည်းရောင်ရောဂါပိုးရှိတယ်ဆိုမှဆေးကုသပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းရောင်စီရောဂါအခမဲ့ဆေးကုသခံယူမှုအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိလိုပါက Grace Cheeဖုံးနံပါတ် ၃၁၀-၄၂၃-၅၄၆၁၊Martin Briseno ဖုံးနံပါတ် ၃၁၀-၄၂၃-၇၈၃၇ သို့မဟုတ် ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ(626)506 9607 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးဂေဇက် ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ်တွင် ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် များပြားလဗသောသူများ အသည်းရောဂါ”စီ” ဖြစ်နေကြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ အရောက်လာနိုင်ပါက မိမိရောဂါ ပျောက်ကင်းနိုင်သော အခွင့်အလန်းရှိပါသည်။ သို့ပါ၍ မိမိနှင့်နီးစပ်သောသူများ၊ မိတ်ဆွေများ ရောဂါဖြစ်နေသူများအား အထက်ပါသတင်းစကားကို လက်ဆင့်ကမ်းစေလိုပါကြောင်း..။
Dr Aung Htet Htun says:
I amamedical officer in Yangon. I have to tell about hepatitis C. Hepatitis C virus can be treated according to their genotypes and viral loads. There are6genotypes in hepatitis C ( genotype 1 to6). Out of 6, genotype2and3are mostly found in south east asia. These2genotypes virus can be cured by taking treatments for6months. Substained virological response ( Cure Rate ) is about 85%. Other types can be cured by taking treatments for 1 year. Substained virological response ( Cure Rate ) is about 50%. It can be treated in local. Total cost varies over treatment duration.6month treatment may cost 50-60 lads and 1 year treatment may cost 100-120 lads.
Dr Aung Htet Htun
ဒီအစီအစဉ်တွေ ရှိတာကို အခုလို ဖတ်ရတာ ရောဂါ ဝေဒနာ ရှင်တွေအတွက် အထူးသတင်းကောင်းပါဘဲ။ လက်တွေ့ကျတော့လည်း အလှမ်းဝေးတဲ့ ခရီးတခု ဖြစ်နေတော့ တော်ယုံ ရောက်အောင် သွားနိုင်ဖို့ မလွယ်လောက်ဘူး။ ပိုက်ဆံ ရှိလို့ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဗီဇာ ဠာနက ပြူးပြဲပြီး အတင်းစစ်ပြီး ပါယ်ချတာ များနေတာဆိုတော့ သတင်းကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ လူတွေက မထိုက် တန်ဖို့များနေတယ်။
Thank you for information given by Author and another input from Dr in Rangoon. It is alwaysaluxury for ordinary folk to get standard medication simply for malaria, tuberculosis or malnourishment. Forget about cancer treatment or something like hep C eradication for people from the street. Costing 10000000 for treatment of Hep C is far out of reach of ordinary citizen. Government have the statutory duty to provide food, cloth and shelter for its citizen. Everyone should be affordable to get treatment if the disease is treatable. The most fundamental duty of government I mentioned is simply not there for situation in Burma. What have we achieved after gaining self-rule in 1948? Or how far have we been down the road to ruin because of wrong policy of government? This military regime had failed us terribly in all aspect of our lives. How many of us had been infested/corrupted by the bad manner, nepotism, bribery and racism of military machine? We need to remove this scum of the earth, enemy of the religion, the Junta from our country and society. We must never forget the inequality of classes, suffering of people and poverty of people under the inefficient military rule. Never again in our history, fascism will ever rule the land of our beautiful land again. Let us remove the junta from power by united people power by boycotting the election. No show at pooling stations on the election day. No Show.